Sirta ku duugida Jidkaaga illaa Lix Sawir Dakhli
Tuesday, April 8, 2008 Jimco, Febraayo 12, 2016 Douglas Karr
Markii aan bilaabay buuggayga wakhti aad u fog ka hor, waan ogahay sida ay u adag tahay in la ilaaliyo baloog oo la abaabulo dhammaan wixii aan ka bartay ee ku saabsan qorista iyo warbaahinta bulshada oo loo sameeyo hal daabacan oo isku xidhan.
Waxay u muuqataa in Darren Rowse ee Problogger ayaa sidaas sameeyay, in kastoo. Waxaan daawaday barta Darren ee kacaysa waxaadna arki kartaa adkaysiga iyo hufnaanta aragtida ah in Darren uu isu beddelay kheyraad cajiib ah oo loogu talagalay dadka wax qora. Problogger Xaqiiqdii waxay kujirtaa liistada 'qasab-ka-aqris' ee nafaqeynta waxaana ka maqan dhammaan faan iyo faan Shoemoney iyo John Chow (jacayl badan ayaan u qabaa raggaas, in kastoo ... Waan akhriyaa boggaggooda, sidoo kale!).
Waa kuwan muuqaalka guud ee buugga ka yimid Amazon:
Blogging-ka ayaa dad badan u noqday madadaalo caan ah oo xiiso leh, laakiin in badan oo ka mid ah dadka wax qora ee internetka wax ku qora ayaa ogaanaya inay sidoo kale noqon karto ilo dhaqaale oo toos ah ama aan toos ahayn. In kasta oo caqabadaha hortaagan bilowga barta internetku ay hooseeyaan, haddana haddii aan la helin hagitaan khabiirnimo ah way fududahay in lagu jahwareeriyo marka guusha aysan u dhigmin waxyaabaha laga filayo. Waxaa qoray abuuraha ilaha aduunka # 1 ee lacag ku sameynta baloogyada, ProBlogger wuxuu akhristaha ka qaataa bilow bilaw ah si uu lacag uga kasbado ama ka dhasho baloog garaynta. Iyadoo loo marayo talaabo talaabo ah casharro wax ku ool ah akhristaha ayaa dooran doona mawduuc barta ah, falanqeyn ku samayn doona suuqa, dejin doona baloog, kobcin doona oo dakhli ku kasban doonaa.
Waxaan ugu hambalyeynayaa Darren iyo Chris tan cutub cusub taariikhda Problogger! Waxay ku jirtaa Liistadayda Rajada ah!
Tags: buuggadarren rowseproblogger
Douglas, aad baad ugu mahadsan tahay xusitaanka buugga ProBlogger. Runtii waxay ahayd shaqo weyn wada shaqeynta Darren iyo Chris, haddana buuggu wuxuu ku socdaa sida ay wax run ahaantii xiisaha u yeelanayaan.
Marka, buug noocee ah ayaad qoreysaa?
John Wiley & Wiilasha
Waxaan helay qiyaastii buug 40 - 50 ah oo ka bilaabmay sida loo hirgeliyo baloog iyadoo la adeegsanayo hababka ugu fiican ee meelaynta mashiinka raadinta, akhriska, iyo istaraatiijiyada. In yar baan taabtay si aan daacad u noqdo!
waad ku mahadsan tahay sheegista Douglas - mahadsanid.
Waxaad sharad, Darren! Waxaan kuugu hambalyeynayaa guushaada wanaagsan ee aad kasbatay!